Koloiko sy Hajaiko ny Teniko | Mpanoratry ny Taona andiany faha-4: Nibata ny amboara i Hobiana - Gazety Inona no Vaovao
Gazety Inona no Vaovao, 6 Martsa 2021
Mpanoratry ny Taona andiany faha-4: Nibata ny amboara i Hobiana
Nosoratan'i Heriarilala, gazety Inona no Vaovao, 6 Martsa 2021, pejy 5.
Nibata ny amboara i Hobiana.
Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity herinandro ity ny valin'ny fifaninanana mpanoratry ny taona 2019 nokarakarain'ny fikambanana Koloiko sy Hajaiko ny Teniko. Voahosotra ho mendrika indrindra tamin'izany Razanajatovo Andrianimerina Hobiana rehefa nahazo ny isa 228.5 tamin'ny mpitsara. Nifaninana tamin'i Fanja Razah sy Voniary i Hobiana izao nibatra ny fandresena izao. Tsy nifanalavitra loatra ny isa azo satria 217 no azon'i Fanja Razah raha toa ka 196.5 no azon'i Voniary.
Mpanoratra, mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny Pôety sy ny Mpanoratra Malagasy Havatsa UPEM nanomboka ny taona 1997 i Hobiana ary nanangana ny Havatsa UPEM sampana Arivonimamo tamin'ny taona 2001. Anisan'ny mason-tsivana tamin'ity fifaninanana ity ny fahavitana zavatra nisongadina nandritra ny taona iray. Anisan'ny nantsoina ho isan'ny mpitsara tamin'ilay fifaninanana tantara foronina Prix Orange du Livre en Afrique na POLA 2019 i Hobiana. Mpanoratra avy amin'ny firenena samihafa eto Afrika no nandray anjara tamin'izany. Ny 24 Avrily 2019 i Hobiana no nitondra ny tsangan-tononkalo Adolantseto tao amin'ny CEMDLAC Analakely, izay niavaka teo amin'ny lafiny fampisehoana sy fahaiza-milalao. Manana tononkalo ao amin'ny boky Vary Faho Voatsimpona izay nivoaka ny 2019 koa izy. Asa soratra nahazo loka tamin'ny fifaninanana Loka Nihry-Lanto avokoa no voarakitra ao. Nampanao atrikasa mikasika ny sarin-teny anaty asa soratra tao Imerintsiatosika izy ny volana jolay 2019. Efa nahazo ny mari-boninahitra Commandeur de l'Ordre des Arts des Lettres et de la Culture avy amin'ny ministeran'ny Kolontsaina izy ny taona 2017. Mbola amperimpanoratana tanteraka i Hobiana amin'izao fotoana ary tsy mitsahatra mitrandraka ho an'ny literatiora malagasy, ny amboaran-tsombintantara Rom-padinkena no navoakany farany.
Tsiahivina fa Ravorombato no mpanoratry ny taona talohan'izao izay mpikamban'ny Havatra - UPEM Sampana Arivonimamo koa. Mbola ho fantatra miandalana ny fotoana hanomezana ny loka ho an'ity mpanoratry ny taona 2019 ity raha ny nambaran'ny mpikarakara. Anisan'ny nahataraiky ny valin'ny fifaninanana ny fihibohana sy ny olana ara-pahasalamana teto amin'ny firenena. Mbola hisy kosa ny fifaninanana andiany fahadimy.